ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဘယ်လိုမျိုးဝတ်စားဆင်ယင်ကြမလဲ???
Scorpio (ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား)လေးတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် Google မှာ ရှာဖွေခံရမှုအများဆုံးအကြောင်းအရာများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် အားကစားသမားများ
ဘဝကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်အောင် အသက် ၂၀၊ ၃၀အရွယ်မှာ လုပ်ရမယ့်အရာ (၂၄)ခု
သင်မသိမဖြစ် သိသင့်တဲ့ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိထားသူတွေရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
အဆိပ်အတောက်ဆန်တဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု (Toxic Friendship) ရဲ့လက္ခဏာ (၇)ခု
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းနှင့် သင့်ပါးစပ်ထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၆) ခု
ကျွန်မတို့ကို မပျော်ရွှင်အောင် လုပ်နေမိသော ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်အမူအကျင့် (၄) ချက်
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာဟာ လူအများစုရဲ့ နှလုံးသားရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇) ချက်
ချစ်သူကောင်လေး အသစ်စက်စက်ကလေးကို ရထားတဲ့ ချစ်မတို့အတွက် ပထမဆုံးဒိတ်မှာပဲ မျက်နှာပျက်စရာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ မရင်ဆိုင်ရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမဆုံးဒိတ်ဆိုတာ First Impression ပဲလေ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီလိုနေ့ထူးရက်မြတ်မှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေမဖြစ်ဖို့၊ First Impression ကောင်းကောင်းရဖို့ ဘယ်လိုမျိုး ဝတ်စားဆင်ယင်သင့်လဲဆိုတာကို မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အချို့သော မိတ်ကပ်တွေက ရေစိုမခံတဲ့အတွက် မတော်တဆ မိုးသည်းသည်းမဲမဲရွာလို့ မိုးမိတာမျိုး၊ ချွေးတွေမတရားထွက်တာမျိုးတို့ဆိုရင် သင့်အတွက် တော်တော်လေးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်စေမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် သက်တမ်းအကြာကြီးလက်တွဲဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ RS တစ်ခုအတွက် First Date မှာ ရေစိုခံမိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်နော်။
၂။ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် ဖိနပ်စီးပါ။
မတော်တဆ နှစ်ယောက်တည်း အေးဆေးလမ်းလျှောက်ရင်း စကားပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကို ရောက်သွားခဲ့လို့မှ သင်စီးလာတဲ့ဖိနပ်က သင့်ခြေထောက်ကို ဒုက္ခပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် First Date မှာတင် တော်တော်လေး ကသိကအောက်ဖြစ်ရမှာပါ။
၃။ သက်သောင့်သက်သာရှိမယ့် အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ပါ။
သင်က အစိုးရရုံးသွားတာလည်းမဟုတ်၊ မင်္ဂလာဆောင်သွားတာလည်းမဟုတ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး First Date မှာ သင့်အတွက် ကြည့်ရမဆိုးမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။ ရာသီဥတုနဲ့လိုက်လျော်ညီထွေဖြစ်အောင်လည်း ကြည့်ဝတ်ဦးနော်။
၄။ သင့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့အလှအပကို ထင်ဟပ်စေမယ့်အရောင်များကိုသာ ဝတ်ဆင်ပါ။
ဒူးနေရာဒူး၊ တော်နေရာတော်ကိစ္စကအဆင်ပြေသွားပေမယ့် သင်ဝတ်ဆင်လာတဲ့ အင်္ကျီအရောင်က သင့်ရဲ့မျက်နှာကို ပိုမိုမတောက်ပစေတာမျိုး သင့်ရဲ့အလှအပကို မပေါ်လွင်စေနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့် အဝတ်အစားအရောင်ရွေးချယ်တာကိုလည်း သတိထားဖို့ လိုအပ်တယ်နော့။
ဘယ်သူမြောက်ပေးလိုက်လဲတော့ မသိဘူး။ ရည်းစားနဲ့ချိန်းတွေ့ရင် ကျောက်မျက်ရတနာတွေ အများကြီးတပ်ခိုင်း၊ ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာကိုပြခိုင်းဆိုတဲ့စနစ်ကို ဘယ်သူက ပြင်နိုင်မှာလဲ?? တော်တော်များများ ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် လက်ဝတ်လက်စားတွေ အများကြီးကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ အရမ်းတောဆန်တဲ့အပြုအမူပါ။
မိန်းကလေးတို့ရေ…။ First Date ဆိုတာ အင်မတန်မှကို အရေးပါတဲ့အရာမဟုတ်လားရှင့်။ ဒီတော့ ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့နေ့ရက်မှာ မဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်ရလေအောင် အခုလိုမျိုးမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Source: magforwomen, relationshiptips, inc, timesofindia
နက္ခတ်ဗေဒင်မှာ အထင်လွဲခံရတတ်ဆုံး sign တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Scorpio (ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား) ဟာ ရေသင်္ကတဖြစ်ပါတယ်။ Scorpio စရိုက်တွေမှာ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှု ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့် သူတို့ချစ်ရသူတွေအပေါ် သစ္စာစောင့်သိခြင်း တို့ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော် သူတို့မှာ မနာလိုမှု၊ ခေါင်းမာမှုနှင့်...
ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ အချစ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပေါ် ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားကြလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမဆို သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ လိုလားချက်တွေက အသက်အပိုင်းအခြားတစ်ခုစီမှာ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ အချစ်ရဲ့အယူအဆကိုလည်း ကွဲပြားစွာ ရှုမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အသက်...
အသက် ၂၀၊ ၃၀အရွယ်ဟာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အသက် ၂၀အရွယ်ဆိုတာ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေယူပြီး အမှီအခိုကင်းကင်းနှင့် စတင်ရတော့မယ့်၊ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအပေါ် အားအင်အပြည့်နဲ့ စလျှောက်လှမ်းရတော့မယ့် အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၀ကျော်အရွယ်မှာ လူငယ်တိုင်းက ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ မတူညီစွာ ဖြတ်သန်းကြပါတယ်။...
အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိထားသူတွေတိုင်းက ဒီနေရာကို ရောက်လာဖို့ ဘယ်သူကမှ လွယ်လွယ်ကူကူရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်သူတစ်ဦး (သို့) ဘဝမှာ အောင်မြင်သော လူတစ်ဦးကို ကြည့်ပြီး သင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမယ်စကားလုံးက ''ငါလဲ ဒီလိုဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ'' လို့ပေါ့။ သို့ပေမယ့် အောင်မြင်သူတွေရဲ့ ရုန်းကန်မှုတွေကို သင်ကောင်းကောင်းမသိသေးပါဘူး။...